Sihlalutya i-Samsung MU6125 TV, i-4K kunye ne-HDR 10 kwinkonzo ekumgangatho ophakathi | Iindaba zeGajethi
Iithelevishini zinempawu ezingaphezulu nangaphezulu ezenza ukuba sizilahle kulwandle lweenkcukacha, Akukho nto sinokuyenza ngaphandle kokuya kwi-intanethi, kwaye akukho lula kuthi ukuba sigqibe ukuthenga umvundla kwindawo enkulu, ngakumbi xa sijonga amaxabiso awahlukeneyo esinokuwaxabisa kwezi meko. Sithetha ngento yokuba intengiso kamabonakude kungoku nje izele ziinkampani ezibonelela ngeemveliso ekucingelwa ukuba ziyafana ngexabiso elahluke kakhulu… yintoni umahluko wokwenene?
Namhlanje siza kuhlalutya umabonakude ophakathi kwinqanaba eliphakathi kunye neenkcukacha eziphakamileyo kwaye zibe nexabiso elimangalisayo ngeLwesihlanu omnyama odlulileyo, sithetha ngomabonwakude I-Samsung MU6125, i-TV ekumgangatho ophakathi ezisa isisombululo se-4K kunye neempawu ze-HDR 10 kuzo zonke iipokotho, masiye apho ngohlalutyo.
Njengesiqhelo, siza kuhlalutya ngokweenkcukacha iimpawu zikamabonwakude osinika uyilo olufana kakhulu nolunye uthotho lweSamsung kwaye olunokusenza sithandabuze, ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka singene kwiinkcukacha ezithile ukuze siqonde ukuba esinye sezixhobo esilungelelanise ngakumbi amaxabiso asezantsi kwinkampani yaseKorea nangona ingafumani sithuba siyifaneleyo ezishelfini zeevenkile ezinkulu, ngokuchanekileyo ngenxa yale nkcukacha. Kufuneka iqatshelwe ukuba iyunithi esiyihlalutyayo yathengwa kwivenkile ye-499 euros, ngaphandle kwento yokuba okwangoku inyuke ngamandla kwixabiso elime malunga nee-euro ezingama-679 ngokokugcinwa kweengcali.
1 Uyilo: Kudala kakhulu, Samsung kakhulu
2 Iimpawu zobugcisa: Ukulungelelanisa udidi oluphakathi lweethelevishini
3 Konke kuthanda: Eyona ilungileyo kwi-Samsung MU6125
4 Iziphumo ezingalunganga: Eyona nto imbi kakhulu kwi-Samsung MU6125
Uyilo: Kudala kakhulu, Samsung kakhulu
Asinakulindela okuninzi kuyilo, ikakhulu kuba iinxalenye ezinje ngenkxaso kunye nemiphetho zisetyenziswe ngokupheleleyo kolunye uthotho, ngakumbi sinenkxaso efanayo nezixhobo ezininzi uthotho lwe-samsung 6 yeethelevishini. Iifreyimu ezimnyama ze-anthracite zenziwe ngezinto zeplastiki kwaye zigqityiwe Jet Mnyama, Abathandi bothuli kunye nokubakho kwe-micro-abrasions, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukuba singabathandi bokucoca okunzulu, le TV kufuneka ikhathalele malunga noku, ukubheja ikakhulu kwiintyibilizi zeentsiba okanye kwimicrofiber.
Izinto zeplastiki kuyo yonke indawo, zifihlwe ngokugqibeleleyo. Isamsung yazi kakuhle ukufihla olu hlobo lweenkcukacha, ngale nto sithetha ukuba xa umabonwakude ebekiwe uyakudlula ngokugqibeleleyo ngezinto zePremiyamu kodwa xa kuziwa ekuyinyuseni, siyakuqonda ukuba ubunzima bukhaphukhaphu kwaye ngenxa yomjikelo wayo ibambelela kakuhle kwiqela lenjongo TV ye-intshi ezingama-50.
Kuyafana kulawulo, umyalelo ogcwele amaqhosha, iplastiki kwaye ngaphandle koyilo lokuyila, ukusebenza kuyaqhubeka kwakhona, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo amathuba amakhulu asinikwa yinkqubo yokusebenza. Le yimilinganiselo yaseburhulumenteni:
Itotali ngesiseko: 1128.9 x 723.7 x 310.5 mm
Ubunzima ngokuma: 13,70 kg
Iimpawu zobugcisa: Ukulungelelanisa udidi oluphakathi lweethelevishini
Njengesiqhelo, siza kushwankathela ezona mpawu zibalulekileyo, ukuze wazi ukuba uza kwenza ntoni. Phakathi kwabo, kufanele kuqatshelwe ukuba ngaphandle kokuba nee-USB ezininzi kunye ne-Ethernet, ukonwabela izinto ezininzi zemultimedia, into esingenayo iBluetooth, into oza kuyiphosa ngakumbi xa uqhagamshela izixhobo zonxibelelwano ezongezelelweyo
panel I-intshi engama-50 iflethi
Isigqibo: I-4K 3840 x 2160
HDR: Itekhnoloji ye-HDR 10
I-PQI: 1300 Hz
Sombhalo: I-DTT DVB-T2C
OS: Ulungelelwaniso lweTV ekrelekrele
Unxibelelwano I-HDMI: 3
Unxibelelwano I-USB: 2
evakalayo: Izithethi ezibini ezingama-20W ezineDolby Digital Plus kunye neBass Reflex
Ulawulo lwemibala: PurColor
Umlinganiselo weDynamic: Umahluko weMega
Kodwa into ekufuneka uyiqwalasele ikwangamandla e-Hardware efihla i-Smart TV yakho, kwaye loo nto kukuba ukubheja kwe-Samsung kwizixhobo zayo zokusebenza kunye nokusebenza kwayo, oku kuyenza ukuba isebenze ngokumangalisayo, kwi-Actualidad Gadget besisoloko singabathandi be-Android TV , Kufuneka sitsho ukuba iTizen isixhobo esongezelelekileyo asiyomfuneko kolu hlobo lomsebenzi. Elinye inqaku eliphambili kukuba sijamelene nomabonakude ngokusebenza kwamandla kuDidi A, ayisiyiyo eyona intle kwintengiso, kodwa inika iziphumo ezihle zokusetyenziswa.
Konke kuthanda: Eyona ilungileyo kwi-Samsung MU6125
Sinexabiso elinokhuphiswano olukhulu, sijamelene nalo iphaneli ye-VA enesisombululo se-4K esisinika umahluko olungileyo, oko kukuthi, siya kuba nakho ukonwabela imifanekiso ezinzileyo kwizigqibo ezilungileyo, akukho kuvuza ukukhanya kunye nokubala okumnyama. Inyani yile yokuba umfanekiso ubonakala ubukhali kakhulu, nangona uthathela ingqalelo ukuba sijongane nepaneli ye-intshi ezingama-50, ngokucacileyo iyasilela ngezigqibo ezingaphantsi kwe-1080p ye-HD epheleleyo.
Inkqubo yayo yokusebenza iyamangalisa, sinokonwabela umxholo okwi-intanethi kwisikhangeli sayo kwaye sisebenzise ithuba loqhagamshelo lwe-WiFi, olukwaziyo nokunxibelelana neenethiwekhi ze-5 GHz.Yindlela ehamba ngayo le TV, ngaphandle kokulibala ukuba enkosi INetflix kunye neMovistar + Njengezicelo ezihambelanayo kwivenkile yakho sinokonwabela umxholo we-HDR kwi-intanethi nakwizisombululo ze-4K. Ke iTizen isivumela ukuba sifumane okuninzi kumabonwakude.
Isandi sizikhusela ngendlela enomdla, ikwadityaniswa nentambo ebonakalayo kunye nokwenza isibini esifanelekileyo esinebhari yesandi, Iimpawu zayo zeDolby ziboniswa ngaphezu kokwaneleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, umabonwakude usebenza kakuhle kwaye ubonakalisa ngaphezulu ngokwaneleyo kuluntu ngokubanzi olu luhlobo lweemveliso.
Iziphumo ezingalunganga: Eyona nto imbi kakhulu kwi-Samsung MU6125
Yonke into yayingazukulunga, eyona nto iphambili kuqala yile siphambi kwepaneli ye8BitsOku kuthetha ukuba nangona sine-HDR 10 kwaye siza kusebenzisa awona mgangatho ubalaseleyo we-HDR, asizukukwazi ukuhamba phakathi kwalo lonke uluhlu olusinika lona, ​​kwaye yile nto siza kufuna ipaneli 10Bits, ngaba umahluko uyaqatshelwa? Mhlawumbi ayonelanga kumsebenzisi oqhelekileyo.
Ikwanaso nomabonwakude weBluetooth, into esingayi kuyiphosa, ngaphandle kokuba ufuna ukuyigcina kwi-wiring, umzekelo xa uqhagamshela ibar yesandi ehambelanayo, okanye umzekelo kwizixhobo zolawulo kujongano lomsebenzisi. Okokugqibela, qaphela ukuba kubonakala ngathi ayingomdlalo weTV omele ukuwudlala, ngakumbi okona msebenzisi ufuna kakhulu ngokwemihla yokuhlaziya kunye nokubeka ilog, ngaphandle kwento yokuba sinemowudi yomdlalo esombulula imeko kakuhle, ixesha lokuphendula le-10 ms Akuninzi, ihamba kathathu, umzekelo, iimonitha ezikhethekileyo.
Inkqubo yeTV yeTV
Ngaphandle kwamathandabuzo, sijamelene nomabonakude ongqongqo kakhulu kumaxabiso, kodwa hayi kwiimpawu, iSamsung izinqamle ukusika ezinye ezongezelelweyo, kodwa hayi ngokubonakala, kwaye ngenxa yoko ifumana isikrini se-intshi ezingama-50 esinezinto ezintle. Ngelixa liyinyani alibonakali linomtsalane xa likwi-700 ye-euro, ukuba sithathela ingqalelo ukuba inokubonwa xa kuthengiswa kwii-euro ezingama-499 kunokuba yinto efanelekileyo ukutshintsha umabonakude. Ngokuqinisekileyo ngeli xabiso akunakufumana nto ilunge ngakumbi kwintengiso.
Uyilo oluncinci kunye nesakhelo esincinci
I-4K kunye ne-HDR10
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutya i-Samsung MU6125 TV, i-4K kunye ne-HDR 10 kwinkonzo yomgangatho ophakathi
Ndifuna ukwazi ukuba le TV inegalelo le-HDMI 2.0
Molo, ndingathanda ukwazi ukuba ndingadibanisa njani iseti yentloko. Enkosi